Soshiki Karate 組織 空手 (松濤館) ကရာတေး: ကိုယ် နှုတ် စိတ် အမူအရာ ယဉ်ကျေးခြင်း By - Myoma Myint Kywe
ယနေ့ခေတ်သမယ အခါတွင်သား သမီး တို့ကလည်း ၄င်းတို့နှင့် ပတ်သက်စပ်ဆိုင်သော ၀တ်တရားများကို မသိကြတော့၊ အလေးကရု မပြုကြတော့သလို၊ အချို့အချို့သော မိဘများ ကလည်း သားသမီးတို့အပေါ်တွင် အလိုလိုက် လွဲတတ်ကြသလို တစ်ချို့ ကား သားသမီးတို့အပေါ် မိဘတို့ ထားအပ်သော၊ ရှိအပ်သော ၀တ်တရား တို့ကို ကျေပွန်အောင်ပင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြတော့ပဲ တာဝန်ပျက်ကွက်
ဤတွင်မက ယဉ်ကျေးမှု သည် မိဘနှင့် သားသမီး ဆက်ဆံရေး၊ မိသားစုတစ်စုနှင့် အခြားမိသားစု ဆက်ဆံရေး၊ ဌာနဆိုင်ရာအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး၊ ဆရာနှင့် ဒကာတို့၏ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး၊ ဆရာနှင့်တပည့် ဆက်ဆံရေး၊ လင်နှင့်မယားတို့၏ ဆက်ဆံ ရေး၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့၏ ဆက်ဆံရေး၊
ယောက္ခမနှင့်သားမက်ဆက်ဆံရေး၊ ယောက္ခမနှင့် ချွေးမ ဆက်ဆံရေး၊ သမီးယောင်းမ ဆက်ဆံရေး၊ ဆရာနှင့်တပည့်ဆက်ဆံရေး၊ အစိုးရနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေး၊ အရာရှိနှင့်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေး၊ ဈေးရောင်း
ယဉ်ကျေးမှုသည် အပြန်အလှန်အသုံးဝင်လှပေသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်လှပေသည်။
ယနေ့ခေတ်သမယ အခါတွင် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးနှင့် အပြန်အလှန် ထားရှိအပ်သည့် ၀တ္တရားများကို နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နားလည်မှုအားနည်းလာကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိ
လူမှုရေးဆက်ဆံရေးတွင် ယဉ်ကျေးမှုသည် များစွာအရေးကြီးပေ၏။
လောကီလော ကုတ်နှစ်ဖြာသော အကျိုးကျေးဇူးအတွက် နည်းပေးလမ်းပြအဖြစ် မြန်မာလူမျိုးတို့ လိုက်နာကျင့် ဆောင်လျက်ရှိသည့် ဆုံးမလမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်ပေသည်။
လူ့ကျင့်ဝတ် သိက္ခာ၏အနှစ်သာရသည် “စာရိတ္တကောင်းမွန်ရေး၊
ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ရေး နှင့် ပြည်သူ့နီတိယဉ်ကျေးမှု စည်းကမ်းလိုက်နာရေး” ပင် ဖြစ်သည်။
“ကိုယ်ကျင့်တရား” ဟူသော “လူ့ကျင့်ဝတ် သိက္ခာ” သည် ရာထူးဂုဏ်သိန်နှင့်မဆိုင်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ကြွယ်ဝမှုနှင့်လည်း မသက်ဆိုင်။ လူ့ကျင့်ဝတ် သိက္ခာသည် ငွေ နှင့်ဝယ်ယူ၍ရသော အရာမျိုးမဟုတ်။ ရာထူး ဂုဏ်သိန်နှင့် တိုင်းတာ၍ ဆုံးဖြတ်၍ရသော အရာမျိုးလည်း မဟုတ်ပေ။ ဆင်းရဲခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း နှင့်လည်း မသက်ဆိုင်ပေ။ လူတို့၏ မိမိကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးဆောက်တည် အပ်သော အလေ့အကျင့်မျိုး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “လူ့ကျင့်ဝတ် သိက္ခာ” (ethics and dignity) ဟူသည် မိမိကိုယ်တိုင် ဆောက်တည်ကျင့်သုံးမှု ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ်ကျင့်တရား (morality) ဖြစ်သည်။
လူ့ကျင့်ဝတ် သိက္ခာတွင် ကိုယ်အမူအရာ
(Physical action ကာယကံ)၊ နှုတ်အမူအရာ
(Verbal action ၀စီကံ)၊ စိတ်အမူအရာ
(Mental action and Mental culture မနောကံ) ဟူသော အမူအရာသုံးပါး (ကံသုံးပါး) သည် အခြေခံ ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် ကိုယ်အမူအရာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ နေရုံမျှဖြင့် လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ မကောင်းနိုင်။ ထိုနည်းတူ နှုတ်အမူအရာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ နေရုံမျှဖြင့် လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ မပြည့်စုံနိုင်။ စိတ်အမူအရာ တစ်ခုတည်း ကောင်းနေရုံမျှဖြင့်လည်း လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ကောင်းသည်ဟု မသတ်မှတ်နိုင်ပေ။
၃. မိမိကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူတစ်ဦးအား မတော်တဆထိခိုက်နစ်နာမှုရှိပါက နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း မရှိစေဘဲ ထိုတစ်စုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အား ကျေနပ်သည်အထိ တောင်းပန်ရာ၏။
၃၅. (အိမ်ထောင်ရှိသူများဖြစ်ပါက) ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး အိမ်ထောင်ရေး၊ လူမှုရေးသစ္စာရှိရာ၏။ (fidelity, honesty, humility, mutual respect, mutual understanding and loyalty များနှင့် ကိုယ်စီကျင့်ကြံနေထိုင်ရာ၏။)
တစ်ပါးသူများနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်
တင့်တယ် အဆင်ပြေမှုရှိအောင် မနေတတ်ခြင်း၊ သံသယဖြစ်စရာ
အပြောအဆို အပြုအမူများပြုလုပ်ခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။
လိမ္မာယဉ်ကျေး ပြည့်ရင်သွေး၊ ပြည်သူ့နီတိ နှင့် လောကနီတိ၊ မောင်မောင်တိုး
မြို့ မ မြင့်ကြွယ် ၏